चुस्त सेवा पाउने नेपालीको सपना कहिले पुरा होला ? - समसामायिक | Kantipur TV HD
DOWNLOAD KANTIPUR TV APP
चुस्त सेवा पाउने नेपालीको सपना कहिले पुरा होला ?
असार ९, २०७९
सरकारी कागजात बनाउन जाँदा छिटो–छरितो र चुस्त सेवा पाउने नेपालीको सपना कहिले पुरा होला ? अहिले सरकारी कार्यालयमा कुनै पनि कागजात बनाउन पुग्ने हरेक जसोले गर्ने प्रश्न हो यो । सरकारी सेवा लिएवापत नागरिकले हरेक वर्ष कर तिर्ने गर्दछन् । तर सेवा लिँदा भने सास्ती नै सास्ती भोग्छन् । सेवाग्राहीको बढ्दो चापकै बीच दशकौँ पुरानो प्रविधि, झन्झटिलो प्रक्रिया र ढिला सुस्तीले नागरिक सास्ती भोग्न बाध्य भएका हुन् ।
यातायात कार्यालय, राहदानी विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र शाखालगायतका कार्यालयमा जहिले पनि भीडभाड नै हुने गरेको छ । सेवाग्राहीले भनेको समयमा सेवा त पाउँदैनन् नै कयौं झन्झट पनि बेहोर्नुपर्छ । त्यति मात्र होइन बिचौलियाको बिगबिगी पनि उस्तै छ ।
हामी दिउँसो साढे २ बजे केशरमहलस्थित वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र अर्थात एनओसी बनाउने कार्यालयमा पुग्दा सेवाग्राहीको चाप थेगिनसक्नु थियो । लाईन व्यवस्थित गर्ने सामान्य प्रयाससमेत भएको थिएन । एकै जना कर्मचारीले सयौँलाई सेवा दिनुपर्ने बाध्यता त थियो नै घण्टौंदेखि लाईनमा बसेकाहरु कर्मचारीको व्यवहार र कामको झन्झटिलो प्रक्रियाले दिक्दार देखिन्थे ।
यता, प्रविधिमैत्री सेवा दिएको दाबी गर्ने राहदानी विभाग पनि व्यवस्थित छैन । सेवाग्राहीको चाप उस्तै छ । विगतमा जस्तो बिचौलियाको बिगबिगी केही कम भए पनि पूर्ण नियन्त्रण हुन सकेको छैन । अहिले देखिएका कमजोरी सुधारको प्रयास भइरहेको विभागले जनाएको छ ।
एउटा सेवा लिनकै लागि सरकारी कार्यालयमा एक सातासम्म धाउनुपर्ने बाध्यता कायमै छ । त्यसमाथि बिचौलियाको चंगुलमा फस्ने जोखिम पनि उस्तै छ । व्यवस्थित तवरले सहज सेवा पाउने नेपालीको चाहना कहिले पूरा होला ?
Kantipur Television >
थप केही "समसामायिक" बाट
पश्चिमको मुख्य नाका नेपालगञ्जबाट मिलेमतोमा चिनी तस्करी हुने गरेको खुलासा
राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायू सेवा निगम करिब ४८ अर्ब ऋृणमा
घुस लेनदेनसम्बन्धी टेलिफोन संवादको छानबिन गर्न गठित समितिद्वारा काम सुरु
Pradesh Bishesh | प्रदेश विशेष, १४ असार २०७९
Kantipur TV HD, the most popular TV channel in Nepal, brings Nepal to its audiences. Its programmes provide in-depth analyses about the issues of the day and reflect the people’s voice. Its shows explore the multidimensional impacts of important events, by framing them in formats that range from news bulletins, interviews and features to satires, comedies and social drama. Kantipur TV HD captures the many colours our lives are imbued with.
In Kantipur Television
Kantipur Television Network Ltd.
Kantipur Complex, Subidhanagar
+977-01-5135050/ 063/ 068
© Copyright kantipurtv.com
तपाईँको सल्लाह/सुझाव एवं प्रतिक्रिया यहाँ लेखेर पठाउनु होला